China Ukondla amayeza okondla amayeza isixhobo ukondla amayeza kwiNdawo kunye neekati kunokuThengiswa kweCalcium Tablets Repellent Pet Supplies mveliso kunye nabenzi | UMiaSein
Ukutya okuThuthuzelayo kweyeza amayeza okuTya isiXhobo sokuThintela amayeza kwiNja kunye neekati kunokuThengiswa ngeeCwecwe zeCalcium eziXhasiweyo
Igama lemveliso: Ukutya okuThuthuzelayo kweyeza amayeza okuTya isiXhobo sokuThintela amayeza kwiNja kunye neekati kunokuThengiswa ngeeCwecwe zeCalcium eziXhasiweyo
Inkcazo: Emva kokugcwalisa ngamanzi okanye amayeza, qiniseka ukujolisa kancinci emqaleni kwaye uqhubele phambili. Ngaphandle koko, ichiza linokutshitshiswa yinja. Ngomondli weyeza lesilwanyana, izinja akufuneki zisebenze nzima ukuze zithathe amayeza kwakhona.
Imiyalelo: [Amayeza amayeza kunye namayeza alulwelo]: Gcwalisa isincedisi seyeza ngamayeza okanye iyeza elingamanzi, vula umlomo wesilwanyana usilungise, ujonge emqaleni, kwaye utyhale ipiston ngamandla. [Iipilisi okanye iifomsile]: Gcwalisa isiselo sokutya amanzi, cofa amacwecwe okanye iifomsile, vula umlomo wesilwanyana kwaye ulungise, jolisa emqaleni, kwaye utyhale umpu ngamandla
Igama lomxholo: Ukubonelelwa kwezilwanyana zasekhaya kunye nePet
Uhlobo: Amayeza feeder
Ubungakanani (nge-cm): Ubude be-15cm * Ububanzi be-6cm
Phawu: Yondla amanzi, yondla
Indlela yokuhlamba: Hlamba ngamanzi acocekileyo, wome ngelagi eyomileyo okanye womile kwindawo epholileyo nenomoya
Indlela yokugcina: Gcina kwindawo epholileyo neyomileyo, kuthintele ukuvezwa lilanga, kwaye uqinisekise ukuba akukho kufuma kumphezulu wemveliso ngaphambi kokugcinwa, ukuze ungazalisi intsholongwane
Nceda uqaphele: Le mveliso iyilelwe kwaye yaveliswa ngokukodwa yinkampani yethu. Le mveliso ayixhasi ulwenziwo. Nceda ucoce ipleyiti ngexesha emva kwesidlo. Nceda ucoce kwaye ugcine ngokwahlukeneyo kwitafile yabantu. Xa usondla amanzi kunye nokutya, nceda ungagcwalisi amanzi kunye nokutya kugcwele kakhulu, ukwenzela ukuthintela isilwanyana ekuguqulweni xa sibaleka, kunye nokonakala kokutya okubangelwe sisilwanyana akufuneki kugqibe ukutya. Impazamo yokulinganisa ngesandla, nceda ubhekise kwinto eyiyo. Nceda ubuyisele amanzi kunye nokutya kumatshini wokuhambisa amanzi kunye nokuhambisa amanzi ngexesha ukunqanda ukonakala kwamanzi kunye nokutya, kuchaphazela ukhuseleko lwemveliso kunye nempilo yezilwanyana. Ukuba awonelisekanga yile mveliso, nceda unxibelelane nenkonzo yabathengi.
Egqithileyo Ikati ibhegi ephathekayo Pet ubhaka Inja Ikati enkulu yeNdawo yeCapsule Ukuhamba kweCat Bag Carry Schoolbag
Okulandelayo: Iingubo zePuppy ezithandwayo zeBrand Corgi Pug bulldog Inja encinci ebusika Isilwanyana esihlekisayo iPuppy Fall Iimpahla zasebusika
Iimpondo ezintle zenja kunye neebhlukhwe Splash Proo ...
Cat Bag ephathekayo Pet ubhaka Dog Cat ezinkulu Spa ...
Inja enkulu yokufihla iingubo zeLebhu yeGolide ...